MAXAAD II BAHDILAYSAA?!! Mourinho oo war la yaab leh ku yiri Antonio Conte kaddib dhamaadkii kulankii Chelsea vs Man Utd – Gool FM
MAXAAD II BAHDILAYSAA?!! Mourinho oo war la yaab leh ku yiri Antonio Conte kaddib dhamaadkii kulankii Chelsea vs Man Utd
(London) 23 Okt 2016 – Macallinkii hore ee Jose Mourinho ayaa dib ugu laabashadiisii gegada Stamford Bridge kala kulmay guuldarro yax yax leh kaddib markii ay Blues ku bilbishay ilaa 4 gool oo aanay ka jawaabin kooxdiisu.
Dhamaadkii ciyaarta mar ay is qoor qooraysanayeen macallinka Antonio Conte ayaa waxaa la arkayay Mou oo macallinka dhegtiisa wax ugu sheegaya isagoo ku dhaliilaya qaabkii uu ugu dabbaal degayay goolasha Chelsea gaar midkii ugu dambeeyay ee 4-aad.
“Sidaa ha yeelin [dabaaldegga] marka ay 4-0 mareeyso. 1-0 waa okay, balse 4-0 waa bahdil,” ayaa la arkayay Mourinho oo ku sheegaya dhegta Conte weliba cod la maqli karo.
Mar si toos ah loo waydiiyay waxa uu Conte dhegta ugu sheegayay wuxuu diidey inuu Sky Sports , u sheego wixii dhacay.
Mou ayaa waloow uu u muuqdo mid ka xumaaday dabaaldegga Conte, waxaa laftiisa lagu yaqaannaa inuu si aan caadi ahayn u dabaaldego marka ay kooxdiisu gool dhaliso ama badiso.
SAWIRRO XUL AH: Horseed oo dirqi ku badisay iyo Jeenyo oo xasuuqday Rajo
"Dhaawaca Eric Bailly waa mid halis ah" - Jose Mourinho